Cloprostenol सोडियम इंजेक्शन (डी प्रकार पीजी) - चीन Ningbo दोस्रो हर्मोन
डी-Cloprostenol सोडियम इंजेक्शन अंग्रेजी नाम: डी-Cloprostenol सोडियम इंजेक्शन चिनियाँ पिनयिन: डी-Cloprostenol सोडियम इंजेक्शन [पशु औषधि नाम] जेनेरिक नाम लागि डी-Cloprostenol सोडियम इंजेक्शन निर्देशन लागि निर्देशन र लेबल डी-Lüqianliechunna Zhusheye [मेजर संघटक] D- Cloprostenol सोडियम [विवरण] यो उत्पादन एक बेरंग पारदर्शी तरल छ। [Pharmacological कार्य] यो prostaglandins दबाइ छ। डी-cloprostenol प्राकृतिक prostaglandin पीजी एक कार्यात्मक कृत्रिम एनालग छ ...
लागि निर्देशन र लेबल डी-Cloprostenol सोडियम इंजेक्शन
D- लागि निर्देशन Cloprostenol सोडियम इंजेक्शन
[पशु औषधि नाम]
सामान्य नाम: डी-Cloprostenol सोडियम इंजेक्शन
अंग्रेजी नाम: डी-Cloprostenol सोडियम इंजेक्शन
चिनियाँ पिनयिन: डी-Lüqianliechunna Zhusheye
[मेजर संघटक] डी-Cloprostenol सोडियम
[विवरण] यो उत्पादन एक बेरंग पारदर्शी तरल छ।
[Pharmacological कार्य] यो prostaglandins दबाइ छ। डी-cloprostenol प्राकृतिक prostaglandin PGF एक कार्यात्मक कृत्रिम एनालग छ 2α को luteum dissolving मा एक मजबूत प्रभाव छ जो। डी-cloprostenol cloprostenol (racemic मिश्रण) भन्दा 3-4 पटक थप सक्रिय छ। को luteum को बलियो dissolution को कर्पस luteum को तीव्र क्षरण हुन्छ। फलस्वरूप, progesterone उत्पादन मा एक तीव्र गिरावट हुन्छ। को कर्पस luteum को dissolution पछि, follicle विकास ovary मा शुरू हुन्छ, र सामान्य estrus र ovulation गर्न बाँध लाभ। डी-chloroprostol पनि uterine चिल्लो मांसपेशी को contractions कारण र गर्भाशय मा एक contractile प्रभाव छ गर्न सक्नुहुन्छ।
घ-chloroprostol को Intramuscular इंजेक्शन सुँगुरहरु छिटो अवशोषित छ। शिखर गर्न समय 30-80 मिनेट हो, र शिखर गर्न एकाग्रता / एल 2μg छ। साथै, लक्ष्य क्षेत्र मा गर्भाशय र ovary भित्र वितरण एकाग्रता छ जो केवल3घण्टा छोटो आधा समय अवधि, संग उच्च थियो। यो मुख्य रूप मूत्र र मलको मार्फत उत्सर्जित र चाँडै निर्मूल छ।
[सङ्केत गर्छ] यो गाई 'लगातार कर्पस luteum को उपचार को लागि प्रयोग गरिन्छ। यो कर्पस luteum को dissolution लाती र गाई सामान्य estrus फर्कन बनाउँछ।
[उपयोग र औषधिको खुराक] Intramuscular इंजेक्शन: 2ml (घ-chloroprostol को 0.15mg) प्रति खुराक गाई लागि।
[प्रतिकूल प्रतिक्रिया] No adverse reaction has been detected with the recommended dosage.
[विषयहरूलाई चाहिन्छ ध्यान] 1. It is contraindicated in pregnant cows whose miscarriages are not hoped.
2. यो facors कारण cows'dystocia यस्तो असामान्य घातक स्थिति र यांत्रिक प्रतिरोध रूपमा contraindicated छ।
3. यो हृदय रोग वा श्वसन रोगहरु संग गाई मा contraindicated छ।
4 यो गाढा ठाउँमा बोतल पछि 1 ℃ र 10 ℃ बीच तापमान मा राख्नुपर्छ खुलेको छ, र यो 28 दिन भित्र प्रभावकारी हुन्छ। को प्रयोग नगरिएको भाग वेवास्ता गर्नुपर्छ।
यो उत्पादन छोयो गर्दा5Contamination बचा गर्नुपर्छ।
6 गर्भवती महिला वा विरामीहरु अस्थमा, tracheobronchial वा अन्य श्वसन रोगहरु यो उत्पादन छुन हुँदैन।
7 यो उत्पादन आँखा वा छाला संग प्रत्यक्ष सम्पर्क छ भने पानी प्रशस्त साथ तुरुन्तै धोए गर्नुपर्छ।
8 बच्चाहरु यो उत्पादन जोखिम हुन बचा गर्नुपर्छ।
[निकासी अवधि]0गाई लागि दिन
[विशिष्टता] यो सी द्वारा भारित छ 22एच 29clo 6। (1) 2ml: 0.15mg; (2) 20ml: 1.5mg
[भण्डारण] यो airtight राख्नुपर्छ, र एक सुन्दर र गाढा ठाउँमा भण्डारण।
[वैधता अवधि] 24 महिना
अघिल्लो: इंजेक्शन को Chorionic Gonadotrophin (HCG)
अर्को: Cloprostenol सोडियम इंजेक्शन (पीजी)